बैतडीका दश स्थानीय तहमध्ये पाटन देशकै दशौं नमूना शहर प्रस्तावित भएको नगरपालिका हो । २१९ दशमलव २६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो नगरपालिकामा ३० हजारभन्दा बढी जनसंख्या छ । नमूना शहरको रूपमा प्रस्तावित भएपछि नगर क्षेत्रमा अपेक्षित विकास निर्माण हुन सकेको छैन । यद्यपि आफूहरू निर्वाचित भएर आएपछि पूर्वाधारका विभिन्न कामले गति लिएको नगर प्रमुख केशवबहादुर चन्द बताउँछन् । यसै सन्दर्भमा नगरका विकास निर्माण, समस्या तथा चुनौती, भावी योजना लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका बैतडी संवाददाता मोहन चन्दले नगर प्रमुख चन्दसँग गरेको कुराकानीको सार :
तपाईं नगरपालिकामा निर्वाचित भएर आएपछि जनतालाई महसूस हुनेगरी के कस्ता काम भएका छन् ?
म निर्वाचित भइसकेपछि स्थानीय तहबाट हुने थुप्रै काम सम्पन्न भएका छन् । यसमा विकास निर्माणका काम धेरै भएका छन् । १ करोड रुपैयाँसम्मका सडक निर्माण गरेका छौं । यस्तै खानेपानी लगायतका गरी दर्जनौं योजना निर्माण गरिएको छ । यसबाट जनतालाई धेरै सुविधा पुगेको छ ।
नगरपालिकाले निर्माण गरेका ठूला योजना के के हुन् ?
ठूला योजना त खासै छैनन् । तर पनि सबै जनताको सहजताका लागि सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका छौं । सोही अनुसार काम पनि गरेका छौं । सबै वडामा सडक पुर्‍याउने काम करीब सम्पन्न भएको छ । कतिपय स्थानमा सडकको ट्र्याक खोल्ने काम पनि गरिएको छ ।
नगरपालिकाभित्र खानेपानी समस्या समाधानका लागि के गरिरहनु भएको छ ?
पाटन बजारको हकमा त नगरपालिकाको सहकार्यमा बृहत् खानेपानी योजना सञ्चालन हुँदै छ । करीब १६ करोड रुपैयाँ लागतमा त्यसको काम अघि बढाइएको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि बजारमा खानेपानीको समस्या समाधान हुन्छ । यस्तै वडा नं १ मा पनि खानेपानीको पहल गरिरहेका छौं । यसै वर्ष काम शुरू हुन्छ । अरू वडामा पनि समस्या पहिचान गरेर समाधानको प्रयासमा छौं ।
विकासका पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका चुनौती के छन् ?
सबैभन्दा ठूलो चुनौती त देश संविधान अनुसार चल्न सकेको छैन । हिजोका दिनमा जुन केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था अनुसार सरकारले काम गरिरहेको थियो, आज पनि अवस्था उही छ । संघमा ‘हामी मात्र सरकार हौं, हामीले भने अनुसार नै सबैथोक हुन्छ’ भन्ने किसिमको सोच छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय नै छैन । एकअर्को सरकारको अस्तित्व नै स्वीकारेको पाइँदैन । तीनओटा सरकारले कसरी चल्नुपर्छ भन्ने सविधानमा उल्लेख छ । तर व्यवहारमा त्यसको पालना हुन सकेको छैन । जनताको समस्या समाधानका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको उत्तिकै जिम्मेवारी भए पनि कार्यान्वयनमा त्यो देखिँदैन । यसले गर्दा विकास निर्माणका काम झन् ओझेलमा परेका छन् ।
करको विषयमा जनताको के गुनासो छ ?
करको विषयमा यहाँ जनताको गुनासो आएको छैन । हामीले जनताले धान्नै नसक्ने वा उनीहरूलाई मर्का पर्ने खालको कर लगाएका पनि छैनौं । तैपनि जनतालाई कुनै कर धेरै लगाइयो भन्ने लागेमा बसेर छलफल गरी समाधानको पहल गर्न तयार छौं ।
नगर क्षेत्रमा नमूना शहरको काम कछुवाको गतिमा भइरहेको छ । यसमा नगरपालिकाले के कस्तो पहल गरिरहेको छ ?
नमूना शहरको काम अघि बढाउन एकदमै पहल गरिरहेको छु । काम छिटो अघि बढाउनुपर्छ भनेर शहरी विकास मन्त्रालयसँग सधैं सम्पर्क गरिरहेको छु । नमूना शहरको काम केन्द्रले सञ्चालन गर्ने कि प्रदेशले भन्ने अन्योलले २ वर्ष बितिसक्यो । त्यसैले काममा केही ढिलाइ भएको छ । यो शहरलाई हेर्ने कार्यालय यही ठाउँमा हुनुपर्नेमा एउटा कार्यालयले दुई–तीन जिल्ला हेर्नुपर्ने भएकाले पनि ढिलाइ भएको हुनुपर्छ । तर काम शुरू नै नभएको भने होइन ।
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० कसरी मनाइरहनु भएको छ ?
नगरमा धार्मिक स्थल धेरै भएकाले सम्बन्धित स्थलमा पर्यटन प्रवद्र्धनको काम गरेका छौं । यहाँ उदैदेव महारुद्र, कैलापाल लगायत थुप्रै धार्मिक मठमन्दिर छन् । तिनको प्रचार प्रसारका लागि योजना बनाइरहेका छौ । रामेश्वरधाम र वनारसी धाममा दुईओटा ज्योतिर्लिंग स्थापना गरिसकिएको छ । यस्तै पतालभूमेश्वरको पर्यटन विकासका लागि केही बजेट छुट्ट्याएका छौं ।
स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजनाका लागि के गरिरहनु भएको छ ?
रोजगारीका लागि यहाँ कृषि र पशुपालन ठूलो सम्भावना भएका क्षेत्र हुन् । यसबाट ठूलो संख्यामा रोजगारी सृजना गर्न सकिने हाम्रो ठहर छ । सरकारी सेवामा जान चाहनेका लागि लोकसेवाका तयारी कक्षा सञ्चालन गर्छौं । कृषि र पशुपालन व्यवसायसँग सम्बन्धित उद्योग स्थापना गर्न सके स्थानीय युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सकिन्छ । यसका लागि के कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ । यसै वर्ष कोल्ड स्टोर निर्माण गर्दै छौं ।
नगरपालिकामा शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ ? यसको विकासका लागि के कस्ता कार्यक्रम छन् ?
नगरपालिकामा स्वास्थ्य सेवा तथा पूर्वाधारको अवस्था सन्तोषजनक नै छ । ६ ओटा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरेका छौं । नगरपालिकाका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधिको अभाव हुन दिएका छैनौं । यसमा पर्याप्त बजेट छुट्ट्याएका छौं । शिक्षाक्षेत्रमा भने लक्ष्य अनुसार काम गर्न सकिएको छैन । शैक्षिक गुणस्तर सुधार चुनौतीको रूपमा छ । यसका लागि विभिन्न ढंगले अघि बढेका छौं । विद्यालयको पूर्वाधार नभएको ठाउँमा पूर्वाधार निर्माण गरिरहेका छौं ।
नगर शिक्षक नियुक्तिबारे बताइदिनुहोस् न ।
नगर शिक्षक आफैले नियुक्त गरेका छैनौं । हिजोको दिनमा जुन विद्यालयमा न्यून तलबभत्तामा निजी शिक्षक भर्ना गरिएका थिए, तिनै शिक्षकको तलबभत्तामा वृद्धि गरेका छौं । शिक्षकलाई न्यून तलब दिएर शोषण गर्ने काम बन्द गर्छौं । अर्को वर्ष एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर, नगरपालिकाबाट बजेट छुट्ट्याएर राहत शिक्षक र निजी शिक्षकको सेवासुविधा समान बनाउने सोच छ ।
विकास निर्माणमा गुणस्तर कामय राख्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?
गुणस्तरीय निर्माणमा विशेष जोड दिएका छौं । धेरैजसो विकास निर्माणका काम उपभोक्ता समितिमार्फत गराएका छौं । विकास निर्माणमा सबैभन्दा पहिलो दायित्व उपभोक्ताकै हुन्छ । जबसम्म उपभोक्ता सचेत हुँदैनन्, तबसम्म नगरपालिकाको प्रयासले मात्र केही हुँदैन । विकासका काममा गलत भएको छ भन्ने लागेमा हामीलाई उपभोक्ताले सूचना गर्नुपर्छ । त्यसबाट हामीलाई अनुगमन तथा नियमनमा सहज हुन्छ ।
तोकेकै समयमा विकास निर्माणका लक्ष्य हासिल गर्न कसरी काम हुँदै छ ?
योजनाहरू हामीले तोकेकै समयमा निर्माण गरेका छौं । करीब ९० प्रतिशत योजना वैशाखभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्छौं । हामीसँग अहिले जनशक्ति छ । योजना सम्झौता गर्न आउने उपभोक्ता समितिका जिम्मेवार व्यक्तिलाई समयमै गुणस्तरीय ढंगबाट निर्माण सक्न निर्देशन दिएका छौं । समय समयमा अनुगमन पनि गर्छौं ।